Illaahay - Horudhac, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Annaga ahaan Masiixiyiin ahaan, rumeysiga aasaasiga ah ayaa ah in Ilaah jiro. By "Ilaah" - iyada oo aan maqaal, oo aan lahayn dheeraad ah oo dheeraad ah - waxaan ula jeednaa Ilaaha Kitaabka Quduuska ah. Ruux wanaagsan oo xoog badan oo abuuray wax walba, kan innaga dhex jira, oo ku jira waxa aan qabanno, kan ku jira iyo nolosheenna oo na siiya daa'in weligiis wanaaggiisa wata. Isku soo wada duuboo, Ilaah nin ma fahmi karo. Laakiin waxaan ku bilaabi karnaa: Waxaan soo qaadan karnaa dhismayaasha cilmiga ilaahey ee noo oggolaanaya inaan garowno astaamaha aasaasiga ah ee sawirkiisa oo na siiso fahanka ugu horreeya ee qofka Ilaah yahay iyo wuxuu ku sameeyo nolosheena. Aynu fiiro u yeelo tayada Ilaah, oo rumeeyaha cusub, tusaale ahaan, laga yaabo inuu si gaar ah u caawiyo.
abuuridda Sabuurrada 19,1: 1,20 ayaa sheegaya: «Samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta Ilaah ...» Rooma waxay leedahay:
joogta ah: Abuurintu waxay muujisaa calaamadaha kala dambeynta, shuruucda jireed. Haddii qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah arrinta ay waxyar ka kala duwan yihiin, haddii uusan dhulku jiri lahayn, aadanuhu ma jiri karaan. Haddii dhulku leeyahay cabbir kaladuwan ama wareeg kale, shuruudaha meeraheena ma oggolaaneyn karaan nolosha aadanaha. Qaarkood waxay u tixgeliyaan tan inay tahay isku imaatinka astaamaha; qaar kalena waxay u arkaan inay caqli gal tahay in la macneeyo in nidaamka qoraxda uu qorsheeyay hal abuur caqli leh.
nolosha: Noloshu waxay ku saleysan tahay walxaha kiimikaad ee adag ee aadka u adag iyo falcelinta. Qaarkood waxay u tixgeliyaan nolosha inay tahay "caqli-gal sababay"; qaar kalena waxay u arkaan inay ku soo beegmeen. Qaar waxay aamminsan yihiin in saynisku maalin uun caddeyn doono asalka nolosha "Ilaah la'aan". Dad badan, si kastaba ha noqotee, jiritaanka nolosha ayaa tilmaan u ah ilaah abuura.
Ninka: Ninku wuxuu leeyahay is-milicsiga. Wuxuu baadhaa adduunka, wuxuu ka fakaraa macnaha nolosha, guud ahaanba waa awoodaa inuu raadsado macnaha. Gaajo jireed ayaa muujineysa jiritaanka cunno; Thirst wuxuu soo jeedinayaa inay jiraan wax hakin kara harraadkan. Rabitaankeenna ruuxiga ah ee macnaha miyuu muujinayaa in macnaha dhabta ahi jiro oo la heli karo? Dad badani waxay sheegtaan inay macno ka heleen xiriirka Eebbe.
Akhlaaqda [akhlaaqda]: Sax iyo khalad ma yahay arin fikradeed ama su'aal ah aragtida aqlabiyadda, mise waxaa jira amar ka sarreeya aadanaha oo tixgeliya wanaagga iyo xumaanta? Haddii uusan jirin Ilaah, markaa bani’aadamku aasaas uma laha inuu ugu yeero wax shar ah, ma jiro sabab lagu cambaareeyo cunsuriyadda, xasuuq, jirdil iyo xasuuq la mid ah. Jiritaanka shar waa sidaas darteed waxay daliil u tahay inuu jiro Ilaah. Haddii aysan jirin, xoog saafi ah waa inuu xukumaa. Sababaha sababihi waxay u hadlayaan rumaynta Ilaah.
Waxaan ugu jawaabnaa naxariistiisa mahadnaq; naxariistiisa aaminnimo; dushiisa
Wanaaga jacaylkeena. Waan ku ixtiraamnay, waan is caabudnay, waan is dhiibnay annagoo rajeyneynayna inaan wax badan bixinno. Maaddaama uu noo muujiyay jacaylkiisa, waxaan u oggolaannay inuu na beddelo si aan u jeclaano dadka hareeraha inaga ah. Waxaan u isticmaalnaa wax kasta oo aan haysanno, wax walba
waxaan nahay, wax walba oo uu ina siinayo si aan ugu adeegno kuwa kale anagoo raacay tusaalaha Ciise.